Anya - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Anya maka iji LCD modul
Biko mara ihe ndị a mgbe ị na-eji ogwe LCD a
1. Onye nrụpụta nwere ikike ịgbanwe
(1). N'ihe banyere ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha, onye nrụpụta nwere ikike ịgbanwe ihe ndị na-agafe agafe, gụnyere ndị na-agbanwe ihe ntanetị. (Resistor, capacitor na ndị ọzọ na-ebugharị ihe dị iche iche nke ihe mejupụtara ga-emepụta dị iche iche na agba)
(2). Onye nrụpụta ahụ nwere ikike ịgbanwe PCB / FPC / Back light / Touch Panel ... ụdị n'okpuru ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha (iji zute nkwụsi ike ọkọnọ nke onye nrụpụta nwere ikike ịgbanwe nsụgharị ahụ na-enweghị emetụta njirimara eletriki na akụkụ mpụga. )
2. Ntinye nrụnye
(1). Kwesịrị iji akụkụ anọ ma ọ bụ akụkụ anọ iji wụnye modul ahụ
(2). E kwesịrị ịtụle usoro nrụnye ka ọ ghara itinye ike na-enweghị isi (dị ka ịgbagọ nrụgide) na modul ahụ. Ọnọdụ nrụnye modulu kwesiri inwe ike zuru oke ka ịghara ibunye ndị agha mpụga na modulu ahụ ozugbo.
(3). Biko jidesie efere na -emepụta ihe mkpuchi iji chebe polarizer. Ebube na-echebe efere kwesịrị inwe ike zuru ezu iji guzogide ike mpụga.
(4). Ekwesịrị ịmalite ịmalite ikuku redio iji kọwaa ọnọdụ okpomọkụ
(5). Akọwapụtaghị ụdị acet acid na ụdị chlorine eji eme ihe mkpuchi, n'ihi na onye nke mbụ na-ewepụta gas na-emebi emebi nke na-emebi polarizer na oke okpomọkụ, na nke ikpeazụ sekit na-agbaji site na mmeghachi omume electrochemical.
(6). Ejila iko, tweezers ma ọ bụ ihe ọ bụla siri ike karịa mkpịsị aka pensụl HB iji metụ aka, kpoo ma ọ bụ hichapụ polarizer gosipụtara. Biko ejikwala mụta asacha uwe uzuzu. Emetụla aka nke polarizer aka aka ma ọ bụ akwa mmanu.
(7). Hichapụ nsụ ma ọ bụ ụmụ irighiri mmiri ozugbo enwere ike. Ha ga-ebute nrụrụ na njachapụ ma ọ bụrụ na ha kpọtụrụ polarizer ahụ ogologo oge.
(8). Emeghela ikpe ahụ, n'ihi na eriri dị n'ime ahụ enweghị ike zuru oke.
3. Ọrụ anya
(1). Egwu na-ada ụda na-akpata nsogbu sekit. Ọ kwesịrị ịdị ala karịa voltage ndị a: V = ± 200mV (overvoltage na undervoltage)
(2). Oge mmeghachi omume na-adabere na ọnọdụ okpomọkụ. (Na obere okpomọkụ, ọ ga-eto ogologo.)
(3). Ihie na-adabere na okpomọkụ. (Na obere okpomọkụ, ọ na-adị ala) na na okpomọkụ dị ala, oge mmeghachi omume (ọ na-ewe nchapụta iji kwado mgbe ọ gbanwere oge) na-abawanye.
(4) Kpachara anya ka odide mgbe okpomọkụ na-agbanwe na mberede. Condensation nwere ike imebi kọntaktị ma ọ bụ kọntaktị eletriki. Mgbe ị nwụsịrị, ịchacha ma ọ bụ ntụpọ ga-eme.
(5). Mgbe egosiputara usoro edozi ogologo oge, onodu nwere ike iputa.
(6). Modul ahụ nwere eriri elekere dị elu. Onye na-eme ihe sistemụ ga-egbochi nnyonye aka nke electromagnetic n'ụzọ zuru ezu. Enwere ike iji usoro nchekwa na mgbochi iji belata nnyonye anya nwere ike ịdị mkpa.
4. Electrostatic orùrù akara
Ihe mejupụtara modulu ahụ na eriri elektrọnik, na mmiri electrostatic nwere ike imebi. Onye na-arụ ọrụ ahụ ga-eyi mgbaaka electrostatic wee kpuchie ya. Emetụla ya ozugbo atụdo na interface.
5. Mgbochi megide ìhè ọkụ siri ike
Ọhụụ siri ike ga-eme ka mmebi nke polarizers na nzacha agba.
6. Nchekwa echiche
Mgbe echekwara modulu dị ka akụkụ ahụ maka ogologo oge, ọ dị mkpa ka ị mee nlezianya ndị a.
(1). Chekwaa ha n’ebe gbara ọchịchịrị. Ekpughela modulu na ìhè anyanwụ ma ọ bụ ọkụ na-enwu ọkụ. Debe 5 ℃ ruo 35 ℃ n'okpuru okpomoku iru mmiri.
(2). Elu nke polarizer ekwesịghị ịdị na ihe ọ bụla ọzọ. Akwadoro ka ị kwakọba ha mgbe mbupu.
7. Nlekọta maka ijikwa ihe nkiri nchekwa
(1). Mgbe a na-adọka ihe nkiri nchebe, a ga-emepụta ọkụ eletrik n'etiti ihe nkiri na polarizer ahụ. Ekwesịrị ime nke a site na iji ọkụ eletrik na ion na-afụ ụfụ ma ọ bụ onye ahu jiri nwayo jiri nlezianya wepu akpukpo ahu.
(2). Ihe nkiri nchebe ga-enwe obere gluu jikọtara na polarizer. Ọ dị mfe ịnọ na polarizer. Biko dọpụta ihe nkiri nchedo nke ọma, emela ọkụ mpempe akwụkwọ.
(3). Mgbe echekwara modulu nwere ihe nkiri nchebe ogologo oge, mgbe a dọpụsịrị ihe nkiri nchebe, mgbe ụfọdụ, a ka nwere ntakịrị ntakịrị gluu na polarizer.
8. Ihe ndi ozo choro nlebara anya
(1). Zere itinye mmetụta dị ukwuu na modulu ahụ ma ọ bụ mee mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ mgbanwe na modulu ahụ
(2). Ahapụla oghere ndị ọzọ na bọọdụ sekit e biri ebi, gbanwee ọdịdị ya ma ọ bụ dochie akụkụ nke modulu TFT
(3) Akwụsasịkwa usoro TFT
(4). Agafela oke kachasị oke mgbe ị na-arụ ọrụ
(5). Adala, gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ tụgharịa modul TFT
(6). Soldering: M / O ọnụ naanị
(7). Nchekwa: Biko chekwaa na mgbochi mgbochi static akpa na gburugburu ebe obibi dị ọcha
(8). Gwa onye ahịa: biko attentionaa ntị na onye ahịa mgbe ị na-eji modulu ahụ, etinyela teepu ọ bụla n'akụkụ akụkụ nke modulu ahụ. N'ihi na enwere ike iwepụ teepu ahụ ọ ga-ebibi usoro ọrụ nke akụkụ ahụ ma kpatara nsogbu eletriki na modulu ahụ.
Ọ bụrụ na amachibidoro usoro ahụ yana enweghị ike izere ịrapara na akụkụ ahụ, enwere ụzọ ndị a iji zere ọnọdụ a na-adịghị mma:
(8-1) Ike nkedo nke teepu ngwa ahụ ekwesịghị ịdị ukwuu karịa ike nrapado nke teepu [3M-600];
(8-2) Mgbe itinye teepu ahụ, ekwesighi ịpụpụ ọrụ;
(8-3) Mgbe ọ dị mkpa iji kpughee teepu ahụ, a na-atụ aro ka ị jiri usoro enyemaka kpo oku mepee teepu ahụ.